गोरु ‘तस्करी’मा महिला र बालकको प्रयोग – जागरण अनलाइन
गोरु ‘तस्करी’मा महिला र बालकको प्रयोग
२०७५ मंसिर १९, बुधबार १४:५१ मा प्रकाशित
दे उखुरी। दे उखुरी क्षे त्रमा भइरहे को गो रुको तस् करीमा महिला र बालकहरु प्रयो ग हुने गरे को पाइएको छ ।
गाउमा पुगे र गो रु खरीद गर्ने , ओ सारपसार गर्ने र संकलन के न्द्रसम्म पु¥याउन महिला र बालकहरु प्रयो ग हुने गरे को पाइएको हो  ।
आइतवार राजपुर गाउपालिका वडा नं. ४ बसन्तापुरमा एकजना महिला र तीनजना बालकले नौ वटा गो रु खरीद गरे र डो ¥याउदै ल्याउने क्रममा स्थानीयले सो धपुछ गर्न थाले पछि विवाद भएको थियो  । पछिल्लो घटनाले गो रु ओ सारपसारमा महिला र बालकहरुको प्रयो ग भएको रहस्य खुले को हो  ।
गो रुको तस् करी संगठितरुपमा भइरहे को छ । गो रु तस् करीका मुख्य नाइके ले गो रु खरीद गर्न महिला र बालकहरु पठाउने , उनीहरुको संरक्षणको लागि युवाहरु परिचालन गर्ने गरे को पाइएको छ । ‘महिला र बालकहरुलाई गो रु खरीद गर्न पठाउ“दा खासै शंका नगर्ने भएकाले यस् तो उपाय अपनाएको हुन सक्छ’– एक स् थानीयले भने – ‘दे ख्ने मान्छे हरुलाई महिला र बालकहरुले गो रु खरीद गर्दा सामान्य रुपले लिने भएकाले यस् तो उपाय अपनाएको हुन सक्छ ।’
गो रु खरीद गर्ने र ओ सारपसार गर्ने कार्यमा संलग्नले भने जो त्नको लागि गो रु खरीद गनेर् गरे को दाबी गर्छन् । ‘नौ वटा गो रु ल्याउ“दै थियौ ं । गाउ“मा गएर खरीद गरे का गो रु जो त्नको लागि ल्याएका हौ ं’– नसिबुन निसाले भन्नुभयो – ‘हाम्रो कामै गाउ“मा गएर किन्ने र महंगो मा पाए बिक्री गर्ने हो  । दुई चार हजार रुपै या“मा किन्छौ ं । अलि महंगो पारे र बिक्री गछौर् ं ।’
यसरी किनिएका गो रुहरु एक ठाउमा जम्मा गर्ने र त्यसपछि ट्रकबाट पूर्वतर्फ लै जाने गरिएको छ । तस्करहरुले लमही नगरपालिका वडा नं. ८ असानी गाउमा गो रु संकलन के न्द्र खो ले का छन् । बासको झाडीमा गो रुहरु जम्मा गर्ने र त्यहा“बाट ट्रकबाट अन्ये त्र लै जाने गरे को पाइएको छ । कृषि प्रयो जनका लागि गो रुहरु खरीद गरे को दाबी संलग्नहरुले गर्ने गरे का छन् । गो रु तस् करहरुले कृषि प्रयो जनका नाममा कागजपत्र बनाएर गो रुहरु संकलन र बिक्री गरिरहे का छन् । कागजपत्रका आधारमा कारो वार बै ध दे खिए पनि तस् करहरुले मासुको लागि ते स्रो मुलुकमा गो रु पु¥याउछन् ।
गो रु तस्करीका लागि ने पाली भूमि
ने पालमा कृषि प्रयो जनका लागि भारतबाट गो रु ल्याउन छुट छ । तर भन्सार भने तिर्नुपर्छ । तै पनि भन्सार नै छले र धमाधम भारतबाट गो रुहरु ने पाल भित्रिइरहे का छन् । कृषि प्रयो जनका लागि ने पाल भित्रिएको दाबी गरिए पनि गो रुहरु ने पाल हुदै ते स्रो मुलुकसम्म निकासी हुने गरे को खुले को छ ।
ने पाल र भारतमा कानुनले नै गौ बध निषे ध गरे को छ । त्यसै ले पनि गाईगो रु ते स्रो मुलुक लै जान भारतीय तस् करले ने पालको बाटो प्रयो ग गर्न थाले का छन् । के ही समयदे खि भन्सार कडा हुन थाले पछि भने तस् करहरुले थो रै थो रै मात्रामा हिडाउदै ल्याएर ने पालकै एक ठाउ“मा जम्मा गरे र पूर्वतर्फ लै जाने गरे का छन् ।
भारतमा एक प्रान्तबाट अकोर् प्रान्तमा गो रु ओ सारपसार गर्न नपाइने कानुनी व्यवस् था छ । त्यसै कारणले पे शे वर व्यापारीहरूले ने पाली भूमि प्रयो ग गरी भारतको पश्चिम बंगाल लाने गरे का छन् । पश्चिम बंगाल पु¥याइएका गाई, गो रु भुटान पनि निर्यात हुने गरे को छ ।
छाडा गाई गो रु कहा गए ?
गो रुको तस् करी बढे पछि छाडा छाडिएका गाई गो रुजंगल तथा बजार क्षे त्रमा दे खिन छाडे का छन् । तस् करहरुले गो रुको बथानस“गै गाईको समे त तस् करी गरे को हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । लमही, गढवा, रिहार क्षे त्रमा छाडा गाई गो रु थिए । तर के ही दिनदे खि ती चौ पायाहरु दे खिन छाडे का छन् ।
दो षीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग
ने पाल कम्यु्निष्ट पार्टी (ने कपा) लमही नगरकमिटीले सो मवार विज्ञप्ति जारी गर्दै गो रु तस्करीमा संलग्नहरुको पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गरे को छ । गो रुको तस्करीले ने पालको राष्ट्रिय जनावर गाई मासिने भएकाले यस्ता गतिविधि तुरुन्त रो क्न र दो षीहरुको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । ने कपाका लमही नगर संयो जक अमर क“वर ‘नवीन’ले हस् ताक्षर गरे को विज्ञप्तिमा दो षीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको हो  ।
वजेट अभाव गराएर सत्तारुढ दलका नेताहरुले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संकटमा पारे–सांसद देवकोटा २०७५ मंसिर १९, बुधबार १४:५१
विप्लव नेकपाका भेरी ब्यूरो इञ्चार्ज ओली पक्राउ २०७५ मंसिर १९, बुधबार १४:५१
‘फिल्मको स्तर बढ्यो तर हलको स्तर बढेन्’ २०७५ मंसिर १९, बुधबार १४:५१